सानिमा लाइफको जीवन बीमा कोषमा २२ करोड २८ लाख, नाफा र कुल बीमा शुल्क आर्जन कति ? – Insurance Khabar
सानिमा लाइफको जीवन बीमा कोषमा २२ करोड २८ लाख, नाफा र कुल बीमा शुल्क आर्जन कति ?
प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७६, आईतवार ०९:३७
काठमाडौं । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७५।७६को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक सोही अवधिमा कम्पनीले ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको नाफा ४० दशमलव ६० प्रतिशतले बढी हो । यद्यपि जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनमा मुनाफा भने हेरफेर हुन सक्नेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको बीमा कोषमा २२ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले बीमा कोषमा ५ करोड ११ लाख रुपैयाँ रकम रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षकधो सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा रकम बढाएको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा आइपुग्दा कम्पनीकोे जगेडा कोषमा १३४ प्रतशतले सञ्चिती बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले १४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ सञ्चिती गरेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा छ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र सञ्चिती गरेको छ ।
त्यसैगरी कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन पनि ३४६ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले ४१ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
कम्पनीले गत आबमा कूल बीमा शुल्क बापत ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ कूल बीमा शुल्क बापत आम्दानी गरेको छ । समिक्षा अवधीको अधिल्लो आवमा कम्पनीले ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कूल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को १२ महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दा कम्पनीले ४३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
कम्पनीको बीमाङबीय मुल्याङकन पछि हुन आउने प्रतिफलले प्रतित शेयर आम्दानी तथा नेटवर्थ सबैमा परिवर्तण हुनेछ र नयाँ बोनश दर कायम हुने कम्पनीले जनाएको छ ।